गृहमन्त्रीका सल्लाहकारद्वारा काँग्रेसप्रति कटाक्ष
१९ कात्तिक । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सल्लाहकार सुर्य सुवेदी पथिकले नेपाली काँग्रेसलाई कडा कटाक्ष गरेका छन् । काँग्रेसले ईट्टा भट्टामा जिउँदो मानिस जलाएर मारेको आरोप लागेका मोहम्मद आलम जस्तो व्यक्तिलाई बचाउन दिएको अभिव्यक्तिप्रति उनले काँग्रेसप्रति यस्तो कटाक्ष गरेका हुन् ।
आलमले गरेका अपराधका क्रुन्दन देशका सबै नागरिकको कानमा गुञ्जिरहेको भन्दै अब उनी कुनै हालतमा पनि उम्कन नपाउने कुरा इंगित गरेका छन् ।
सुवेदीले लेखेका छन् :
“हिजो तिमिले यो सबै नौटन्की हो उ राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर सजिलै उम्किन्छ भन्यौ ।
आज फेरि राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर उसलाइ निर्ममतापुर्वक फसाइयो भन्दै छौ।
के भएको लोकले राम्रैसंग महशुस र मुल्यांकन गरिरहेको छ।
हामी उस्को त्यति त गल्ती र अपराध होइन भन्दा भन्दैपनी अहस्तक्षेपकारी नीति लियौं । स्वतन्त्र निर्णय गर्न दियौं ।
तर तिमि !
तिमिले हिजो हिजो तिमिले आज बर्बराइरहे जसरी चलाएकै हौ। ?
आज रौतहटको चिम्नी र जीउँदै मान्छेको क्रन्दनको स्वर नेपालभरी गुन्जिरहेको छ। कतिसम्म हुँदो रहेछ कति ठुला ठुला हस्तिहरु अपराध र अपराधी बचाउन के सम्म हर्कत हुँदा रहेछन । अब बयान इहलोकमा रहेकासँग लिएर मात्र नहुने देखियो परलोक पुगेकालाई पनि एकपटक सोध्नै पर्ने देखियो।”
नृशंस हत्याकाण्डले देशलाई नै स्तब्ध बनाएको भन्दै कांग्रेशद्धारा कारबाहीको माग
१३ जेठ, काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले रुकुम…
अमानवीय आपराधिक घटनाका दोषीलाई कानूनी कारवाही गर्न बारको आग्रह
१३ जेठ, काठमाण्डौं । नेपाल बार एसोसिएशनले अन्तर्जातीय विवाहको विषयलाई…
प्रवासी नेपाली एकता मंच भारतद्धारा रुकुम घटनाका दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको माग
संघीय संसद्को लोगोमा अद्यावधिक गरिएको नेपालको नक्सा
कोरोना लागेका पालिका अध्यक्षले भने, एकान्तवासमा समृद्धिका थप योजना बनाउनेछु
नेपालमा साढे ५४ हजार पिसीआर परीक्षण, कोरोना संक्रमित ७७२, आइसोलेशनमा ५२२ जना, यस्तो छ अन्य अपडेट